आज ५८० वर्षपछि मंसिर ३ गते सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ, कतिबेर रहन्छ ? - नयाँ कुरो
आज ५८० वर्षपछि मंसिर ३ गते सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ, कतिबेर रहन्छ ?
३ मंसिर २०७८, शुक्रबार ०६:१०
आज मंसिर ३ गते करिब ६ शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ । नोभेम्बर १९ मा लाग्ने यो चन्द्र ग्रहण सन् २०२१ को अन्तिम चन्द्र ग्रहण हुनेछ । पछिल्लो ५ सय ८० वर्षमा पहिलो पटक यति लामो अवधिको चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ ।